musha UNITED UMAMBO BioGRAPHY STORI UK Sports Hunhu Rory McIlroy Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yese yeIrish Professional golfer anozivikanwa se "Rors". Yedu Rory McIlroy Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira nhau yeupenyu hwake musati mazita uye mhuri. Kunyanya zvakadaro, vazhinji vanosiya uye ON-Screen inozivikanwa zvishoma nezvake pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva kuti ane rimwe remazita anoremekedzwa zvikuru munyika yegorofu. Zvisinei, vashomanana chete vanofunga nezveRory McIlroy's biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino, pasina humwezve, ngatitangei.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga
Rory Mcllroy akaberekwa musi we 4th waMay 1989 muHollywood, kuCentral Down, Northern Ireland.
Akanga ari oga mwana akaberekerwa nababa vake Gerry McIlroy (goroferi akashanda Mabasa Akawanda) uye kuna amai vake Rosie McDonald (aishanda mumusha we3M, uyo anonzi Minnesota Mining uye Manufacturing Company).
Muduku Rory akakurira nevabereki vake kuCentral Down, nzvimbo yakasarudzwa inonyanya kuzivikanwa nemakwikwi anoyevedza ari kushanda sezvivako zvezvinhu zvinosanganisira gorofu.
Zvaiva zvisiri izvo kuna baba vaGerry (baba vaRory) vakamboita gorofu semucherecheri kuti aedze kuumba tarenda yegorofu yemwana mumwanakomana wake nekumuisa kumutambo vasati vadzidza kufamba. Kupindura, mwana muduku akawedzera rudo rwegorofu makirasi uye kakawanda akarara nomumwe ari parutivi rwake. Yakanga isati yava nguva refu asati aita zvakakwana zvechikwata uye akanga achirova 40-yard drives uye pamusoro apo paakanga akwegura 2-4.
Achifara neRory's passionate and passionous attitude to the sport, Gerry akachengetedza kuti jaya regorofu raive rakamutswa maererano nekunaka kwake gorofu pamwe chete nezvinangwa zveunyanzvi nekunyora kuchikoro.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Rory aiva nedzidzo yake yekutanga ST. Chikoro chePatric chikoro muHollywood. Paaiva paSt. Patrick, akabatanidza dzidzo nechinangwa chegorofu uye aizivikanwa kuva mudzidzisi wenguva dzose paHollywood Golf course iyo yakaita kuti ave nhengo yake duku paaiva nemakore manomwe chete.
Akabva amire pamapfudzi evanhu vemahombekombe egorofu avo mazano ekutambirwa kwechikwata vakamugamuchidza kubudirira kwepakutanga kusanganisira kugadzirisa kukunda kwake kwekutanga munyika yose muChirangaridzo chenyika ye9-10 yeboka rezera reDoral Golf Resort & Spa kuMiami, Florida.
Nguva iyo yakatarwa nguva iyo vabereki vaRory vakatanga kushanda mabasa mazhinji kuitira kuti vawane mari yekudzidzisa mwana wechidiki uyo gorofu aptitude akazova pachena nekukunda kwechikwata chekukunda.
Achibva kuSt Patrick kuchikoro chepuraimari, Rory akafambira mberi kuSullivan Upper chikoro kwaakange achidzidza kuchikoro chesekondari. Paaiva paSullivan Upper School, mudzidzi wechidiki akazova chikamu chekundika kweEurope muJunior Ryder Cup mu2004 uyewo akapinda muZimbabwe British Masters paakanga akwegura 2005.
Panguva ye16, zvakava pachena kuti nyika yakagadzirirwa kuva yunster yeRory mushure mekunge akava muto mudiki kudarika West of Ireland Championship uye Irish Close Championship. Akatorawo kumusha zita re 2006 European Amateur iro gore iroro.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
2007 yaiva gore rakashata reRory uyo akazoshandura unyanzvi uye akasaina neWorld Sports Management, achiva muduku kudyidzana nhengo yekuti awane Euro Tour card.
Kunyange zvazvo hurumende dzaakatora pakati pemakore 2007 kusvika ku2010 dzakamutora mhando dzakawanda uye dzakawedzera nzvimbo yake yenyika, zita raRory rakanga risati rava rimwe chete rekunyengedza nemapurisa ekurumbira.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Mukurumbira pakupedzisira wakasvika achishevedzera mugore re2011 apo Rory akatasva pamafungu ekutanga zvakasimba paU.S. Open mu2011, achirova zvinyorwa zvakambotongwa ne Tiger Woods uye Jack Nicklaus kuti atore huru yake yekutanga. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Rory ane zvishomanana kufambidzana nhoroondo, ruzivo runosiya zvakawanda zvinodiwa apo goroferi inofananidzwa nevanhu vepanguva iyo vane runyararo rusingagumi rwemashoko echiRoma. Chokutanga paRory mutsamba pfupi ndeyehukama hwake nemusikana wake wekutanga, Holly Sweeny.
Rory na Sweeny vakatanga sevanenge vachiri kuyaruka pavanenge vachikura pamwe chete kuCentral Down. Zvisinei, vaida kuti vave pamwe chete nekusingaperi sezvo vakanyatsogadzikana muC2011 kuti varambe vari shamwari dzepamusoro.
Kufambira mberi, Rory akatsvaka ukama hwakazvipira kuburikidza nehutano Tennis star, Caroline Wozniacki. Doo vaiva vaviri vasina kushamisika avo vaisimudza kuonekwa pamitambo yemumwe nemumwe. Nokusingaperi, vhidhiyo vakavaka ukama hwavo se "Wozzilroy."
Vakaroorana vakatora danho ravo rokutanga kune hukama hwepedyo kuburikidza nekubatanidzwa mu 2013, zvisinei, vakaparadzana mu2014. Rory akakurumidza kutora mutoro wekuparadzanisa kwavo nekucherechedza kuti:
"Mharidzo yeMuchato yakabudiswa pamapera evhiki yakandiita kuti ndione kuti ndakanga ndisati ndagadzirira imba iyo yose inosanganisira. Ndinoshuva Caroline yose kufara kwaanofanirwa uye kumuvonga nokuda kwezviitiko zvikuru zvatakanga takaita ".
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Kuroorana NeErica Stoll
Rory akatanga kusangana nomudzimai wake wemunguva yemberi Erica Stoll mu2012, nguva yaakanga achiri muukama naCaroline. Vaviri vacho vakaramba vachizivana kwemakore anenge maviri vasati vatanga kufambidzana uye vakaita sarudzo yavo yekutanga sevakaroorana muzuva reNew Year, 2015.
Stoll akashanda kuAmerica PGA, basa raakachengetedza kusvikira imba yake ichiitwa musi we 22nd musi waApril 2017 kuAsfordford Castle (inoratidzwa pasi apa) nemusha weC Cong muNational Mayo, Ireland. Zvisinei, zvifananidzo zvemuchato wavo hazvina kuitwa pachena.
Kubatana kwavo iri panguva ino yekunyora, asi kubatsirwa nevana.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Rory ndiye oga mwana akaberekerwa nevabereki vake, tinokuudza mashoko echokwadi pamusoro pevabereki vake vakabayira kuti vaone mwanakomana wavo kuti ave ani nhasi.
Pamusoro pababa vake: Baba vaRory, Gerry Rory ndivo vanokonzera kukurudzira vanakomana vake kufarira gorofu achiri muduku zvikuru.
Baba vakazvipira vakambotamba gorofu semusikana vakagadzikana pakati pemabasa maviri semuchenesi uye barman vane chikonzero chokupa mwanakomana wavo rubatsiro runodiwa kuti ave goroferi anodzidza. Anoenderera mberi kutsigira Rory nekuenda kune hukuru hukuru.
Pamusoro paamai vake: Amai vaRory Rosie vakaita basa rakaoma rekugara pamba panguva yemwanakomana wavo uye kushanda mune imwe nzvimbo yekambani ye3m usiku kuitira kuti asangane nevana vake vechidiki chamakwikwi eGoli.
Anoenderera mberi kutsigira mwanakomana wake nekupinda kumashikiti ake eMasters neBritain Open, achisiya mamwe maviri makuru kuti murume wake apinde.
Rory, kwete kuva munhu anonyengedza, akambobvuma kutsigira vabereki vake zvibayiro nenzira inotevera:
"Kubatsirwa kwevabereki vangu kwave kushamisa. Kunyange kusvikira nhasi, ivo vanhu vaviri munyika ino yandinogona kutaura pamusoro pechinhu chero chipi zvacho; Handikwanisi kukumbira kuva nevabereki vaviri vari nani. Varipo kwandiri panguva dzakaipisisa, handigone kutaura zvakakwana nevabereki vangu. Ndivo vanhu vakanakisisa munyika. "
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Kutsigirwa uye Kubhadhara
McIlroy asayina zvipo zvakakosha uye kubhadhara mari kubva pakusimuka kwake mukurumbira. Izvi zvinosanganisira avo vakasaina neBritish Bank Santander, kambani yebhizimisi rekambani Upper Deck, mucherecheri Omega, EA sports neAddas 'sports brand, TaylorMade.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Shamwari Kurwisana NaTiger Woods
Pakave nehumwe hukakavadzana pakati peCylroy uye Tiger Woods kubvira panguva yaimbova yakarova marekodhi akaiswa nechekupedzisira mu 2011. Kufambira mberi kune 2018 zvakachengeteka kugumisa kuti Milroy ndiye murume akatora nzvimbo yehuni sezita guru pane gorofu. Haisi mazita chete, Rory akatsiva Tiger pane chinyorwa chekupedzisira cheE Sports Sports PGA yevhidhiyo yevhidhiyo.
Kubvuma zvataurwa pamusoro apa nezvimwe zvizhinji zvakaitwa kare, Woods, nerurimi rwakasimba mumatama rakatanga kutumidza munhu weIrish "The Intimidator". Kupindura, Rory Zvisinei, anotaura kuti kunyange zvazvo asiri "Intimidator" weWolds, haatyi nea ace. Maererano naye:
"Ndingatya sei Tiger Woods? Ndiri kureva, murume wacho ane 70-chero PGA Tour inobata, 14 majors - iye ave chinhu chikuru pane zvose mumutambo wedu. mukutya kwezvaakabudirira, asi haana kutyisidzirwa. "
Izvo zvinonakidza kuziva kuti Rory ndeyomumwe wevashandi veHolds. Doo akazova shamwari munguva ye 2012 PGA Tour season.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
McIlroy goroferi anogara achitsvaka anofarira mberi mune zvaanoita. Haatyi kutora zvisarudzo zvehupenyu zvinokosha sezviri pachena mukudzivisa mararamiro ake akarongwa mushure mokutumira makadhi ekukoka. Uyewo haatyi kushandisa mari yaanoshanda zvakaoma sezvinoratidzwa munzvimbo dzake dzakanaka uye zvigadzirwa zvepamusoro.
Anodawo kutora nguva yekupemberera kubudirira kwake neshamwari nemhuri yaanoona kudiwa kwekugara pedyo.
Rory McIlroy Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts: Other Facts
Kunze kwekutamba Gorofu, Rory ane zvaanoda mumutambo uye ane fan of Manchester United. Manchester United uye vateveri vayo vanoda Rory mukudzoka uye vakambomukumbira kuti aite chikwata chaClaret Jug iye akakunda kubva muOver Championship kuHoylake munaJuly 2014.
Iye achiri kunamatira nemudzidzisi mumwe chete, Michael Bannon uyo akamudzidzisa somukomana.
Akabudisa fitness rekodi mu2015 iyo yakanyatsotsanangura kubata kwake kwegore nenzira inotevera: press-ups (6,800), kushambira (3,300 kureba), mabhirikoro (400 maili), chin-ups (6,320) uye kutambanudza ... kwemaminitsi 6,720.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Rory McIlroy Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!